असिनापानीबाट चार करोड बढीको क्षति - halokhabar.com असिनापानीबाट चार करोड बढीको क्षति - halokhabar.com
असिनापानीबाट चार करोड बढीको क्षति
(No Comments) May 3, 2018
काठमाडौं । पाल्पामा असिनापानीले करौडौँको तरकारी बालीमा नोक्सानी पु¥याएको छ । तीन दिनअघि आएको ठूलो असिनापानीले कृषकले लगाएको मकैबाली, तरकारी, सुन्तला, काफल, लिची नष्ट पारेको हो ।
जिल्लाको मदनपोखरा, चिदिपानी, पोखराथोक, अर्गली लगायतका क्षेत्रका असिनापानीले बढी नोक्सान पु¥याएको छ । तानसेन नगरपालिका–१४ अर्गली बस्ने कृषक निर्मल रानाले २० रोपनी जमिनमा लगाएको काँक्रा, सिमी, करेला असिनाले नष्ट गर्दा करीब ६ लाख बराबरको नोक्सानी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तानसेन नगरपालिका–९ का धुव्रराज भण्डारीले पनि २३ रोपनी जमिनमा लगाएको तरकारी बाली असिनाले नष्ट गर्दा १० लाख बराबरको क्षति पुगेको उहाँको गुनासो थियो । तानसेन नगरपालिका–७ कुन्सरेका अनिल थापाको २० रोपनीमा लगाएको खुर्सानी, टमाटर, काँक्रा नष्ट हुँदा रू आठ लाख बराबरको क्षति भएको छ । पन्ध्र वर्षयता ठूलो असिनापानी परेकाले यस वर्ष बालीनालीमा ठूलो नोक्सान पुगेको कृषकहरू बताउँछन् ।
यहाँका किसानले बेमौसमी काँक्रा, करेला, सिमी, लौका, भन्टा, टमाटर, खुर्सानी, बोडी, बन्दा काउली, प्याज र लसुनको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका थिए । फल लाग्दै गरेका सुन्तला, आँप, काफलमा पनि असिनापानीले पूर्ण रुपमा नष्ट गरेको छ ।
अत्यधिक असिनाको कारण व्यावसायिक रुपमा सुन्तलाको खेती गर्दै आएका छहरा अमलावास, भुवनपोखरी, मुझुङ, पालुङ्गमैनादी, बतासे, जल्पा लगायतका किसानको करोडौँ नोक्सान हुँदा कृषक चिन्तित भएका हुन् । भर्खरै खेतबारीमा उम्रेका मकैमा पनि असिनापानीले क्षति पु¥याएको छ ।
मुस्ताङको स्याउ बजार पुग्न सकेन
तरकारी बेचेर धानिएको जीवन
अण्डाको मूल्यमा बृद्धि
झापाका किसन सयपत्री फूलको खेतीतर्फ आकर्षित
पर्वतका किसान माछापालनतर्फ आकर्षित
अनुदानको मलमा कालोबजारी
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक !
नुवाकोटमा आलु र तरकारीका लागि रु पाँच करोड
कृषकलाई कृषियन्त्र प्रदान
जाजरकोटमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना
रोग देखापरेपछि किसान चिन्तित
नयाँ प्रविधिबाट स्याउ उत्पादन
Tweets by @halokhabar
अन्तर्वाता See All
हलो जोत्न लजाउनेहरु विदेशमा गएर जे गर्न नि तयार छन् : हरिवंश आचार्य
मनोज श्रेष्ठ चर्चित हास्य कलाकार हरिबंश आचार्यले कुनै वेला तरकारी खेति गरेका थिए, मदनकृष्ण श्रेष्ठसंग मिलेर । त्यसवेला अनुदान धेरै लिएको भनेर खुवै चर्चा पनि भएकोथियो । तर आफु त्यो फार्ममा हुदासम्म कुनै अनुदान नलिएको दावी गर्छन् । यसैको सेरोफेरोमा गरिएको छोटो कुराकानी ।
काठमाडौं । मुस्ताङको स्याउ बजार पु¥याउन नसक्दा कुहिन थालेको छ । भौगोलिक प्रतिकूलता, निरन्तरको वर्षा र कटानका कारण अघिल्लो हप्तादेखि अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडक सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा बगैँचाबाट टिपेर बजार पठाउन ठिक्क पारिएको स्याउ गोदाममै कुहिन थालेको हो ।
कला र मनोरञ्जन See All
ईंटाभट्टामा फोटो र फिल्म प्रर्दशनी
भक्तपुरको नलिन्चोकमा शनिबार इटाभट्टाका बालबालिका–अभिभावकको उत्साह अरु दिनभन्दा फरक थियो । अरु दिन ईंटा बनाउन, ईंटा ओसार्न व्यस्त बालबालिका शनिबार आफैंले खिचेका फोटो प्रदर्शनीमा देखेर दंग थिए ।
जापनमा पनि छक्कापञ्जा (भिडियो सहित)
पद्मिनी झालाई मिसेस् नेपाल युनिभर्स २०१६ को उपाधि
वीरविक्रम करोड क्लबमा प्रवेस, निर्देशक चाम्स मख्ख
सधै गरिब दुःखीको साथमा मेरो जन्मदिन समर्पित : अभिनेत्री रेखा थापा
Source: Nepal Investment Bank
दस्तावेज See All
नयाँ बर्षको विदाको सूचि सार्वजनिक, लोकतन्त्रमा हटाएर संविधान दिवसमा विदा
काठमाडौं १९ चैत्र । सरकारले २०७३ सालको सार्वजनिक विदाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । विदाको सूचीमा खासै फेरवदल नभएपनि केहि भने परिवर्तन गरेको छ ।..
महत्वो नबुजेको उपयोगी खेति -सहिजन (moringa olifera )
कृषि विकास बैंकले माग्यो झण्डै ३ सय कर्मचारी
किसानलाई खुसीको खबर !
नेपालमा खेती गरिने मुख्यमुख्य तरकारी बालीहरुको बीउ उत्पादन प्रविधि
नेपालमा गरिनेमध्ये कुन बाली राम्रो ?
© 2015 Halo khabar Powered By : Radiant